Expert Semalt Ihe banyere Hacking Mmegide & ndach; Olee & & Ntak?
Dika otutu ndi mmadu na-agbanye n'igwe, enwere ihe iyi egwu - emeru.Na mbido, okwu ahụ na-ezo aka n'usoro ịmụ ihe na kọmputa na asụsụ mmemme. Ka oge na-aga, okwu ahụ bịara dị njọnke pụtara na ị nwere ike ịfefe netwọk kọmputa ma ọ bụ nchedo usoro.
Igor Gamanenko, otu n'ime ndị ọkachamara na-ahụ maka Ọkachamara ,na-ele anya nke ọma ihe kpatara na ebumnuche nke ịwakpo hacking.
N'ozuzu, webers level level 5 ụdị ọgụ megide netwọk na kọmputa. Ndị a gụnyere:
1 - umywalki laufenn. Mgbasa Ozi (DDoS) nke a na-ekesa
A na-emepụta ha iji mebie usoro ndị na-enweghị ezigbo nchebe nalekwasị anya n'ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe nakwa njikọ dị na netwọk ahụ. Dịka ọ dị, ọgụ DDoS na-achọ imebi usoro ahụ site n'iziga ọtụtụ arịrịọnke na-eme ka netwọk ma ọ bụ usoro ịkụda ma ọ bụ mechie. N'agbanyeghị nke a, ihe ka ọtụtụ usoro na-eguzogide mwakpo ahụ ma na-agbake ngwa ngwa.
2. Trojan ịnyịnya
Nke a bụ ngwanrọ nke edozi dị ka ihe dị mkpa freeware ma ọ bụ shareware. Ihe ngwanrọ ahụa na-etinyekarị ya site n'aka onye na-elekọta ụlọ ọrụ nke na-amaghị ihe software ahụ nwere n'ezie.
Dịka okwunyere, ngwanro ahụ nwere njirimara na-emepe ụzọ azụ nke usoro gị ka ikweenwetaghị ikike ịnweta usoro gị mgbe ọ bụla i jiri ngwanro ahụ. N'aka nke ọzọ, ngwanro ahụ nwere trigger nke ụfọdụ na-ewepụma ọ bụ site na ụbọchị. Ozugbo akpalitere, software ahụ kwụsịrị usoro ma ọ bụ netwọk gị. Spyware bụ ihe na-adịghị emerụ software nke dịa na-ejikarị anakọta data nke e mesịrị ree ụlọ ọrụ ahịa.
3. Nje Virus
Nke a bụ ihe iyi egwu kachasị emetụta weebụmasters. N'ebe kachasị elu, ọ bụusoro obi ojoo nke nwere ike igbanwe onwe ya. Ihe bụ isi na-elekwasị anya na nje bụ ịwakpo ma bibie usoro onye ọrụ ahụ..Ọchaihe atụ nke mmemme obi ọjọọ gụnyere Frodo, Cascade na Tequila.
4. Ebe nrụọrụ weebụ
Ndị a bụ saịtị na-enyo enyo nke na-eji ike nchedo eme ihe na teknụzụ weebụ ụfọdụmee ka ihe nchọgharị gị banye na ọrụ ndị a na-akwadoghị.
Nke a bụ malware na-edepụta onwe ya nke na-egbochi akụ dị oké ọnụ ahịa na usoro gị ruo mgbe ọna-arụbiga ọrụ ókè ma kwụsị ọrụ. A na-eme ikpuru maka kọmputa dị iche iche nke na-eme ka ha ghara ime ihe megide ụfọdụ usoro.
Ya mere, gịnị mere ndị na-eme nnyocha ebe nrụọrụ weebụ ji etinye aka n'ime ihe ọjọọ ndị a?
1. Ịnweta ma jiri usoro gị dị ka Ntaneti Relay Ịntanetị maka ihe omume na-akwadoghị-ebe ọ bụndị omempụ na-etinyekarị aka n'ihe omume na-akwadoghị, ọ dị mkpa ka ha zoo ọrụ ha. Iji mee nke a, ha na-ewepu sava iji chekwaa ọdịnaya rụrụ arụma ọ bụ maka nkwurịta okwu.
2. Iji zụọ ozi.
3. Maka ntụrụndụ na ntụrụndụ.
4. Maka ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị na-ewe iwe ma ọ bụ ndị na-ewe iweO yikarịrị ka ọ ga-agbagha usoro gị na mwakpo ọbọ.
5. Maka mgbasa ozi-ụfọdụ ndị omempụ na-ahụ mgbasa ozi ma na-eme ihe ọ bụla iji chọpụta.
6. Iji nwalee ma ọ bụ nwalee usoro-na ụfọdụ, webmasters chọrọ ndị ọkachamara ICTiji nyochaa usoro ha iji chọpụta adịghị ike ya n'ime mgbalị iji nyere aka n'ịkwalite nchekwa.
7. N'ihi ọrịa a maara dị ka Asperger Syndrome. Ndị na-arịa ọrịa aha bụ ndị na-emegide mmadụ kama enwere ike itinye uche na nsogbu maka ogologo oge.
8. N'ihi ọchịchọ ịmata ihe..
9. Iji chọpụta ndị ọrụ, ndị di na nwunye, ndị ahịa ma ọ bụ ndị òtù ezinụlọ ha ruru.
10. Iji nweta ikike egwu.
11. Dị ka ihe ọgụgụ isi.
12. Maka uru ego-ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ anaghị eme ya maka ego, ụfọdụ cyberndị omempụ na-eme ka ha dị ndụ site na itinye aka na kaadị akwụmụgwọ.
Ndị mmadụ na-ebute mwakpo ọjọọ
Ụlọ ọrụ nchebe Ịntanetị - ụlọ ọrụ ndị a nwere nchebe kachasị mma nke na-eme haihe na-adọrọ adọrọ maka ndị nledo.
Ụlọ ọrụ profaịlụ dị elu-ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ ndị otu mbaabụkarị ihe a na-apụghị izere ezere maka ndị na-agba ọsọ na-achọ iji nweta nkwanye ùgwù.
Onye ọ bụla nwere saịtị-ọ bụ ezie na ndị na-arụ ọrụ na-eleba anya na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-emekarị,Ndị omempụ adịghị echechi imechi usoro ọ bụla na-adịghị ike.
Dịka onye nwe ụlọ ọrụ weebụ, ịkwesịrị ịrụ ọrụ na iji chebe weebụsaịtị gịhacked. Na-eme ka o doo anya banyere ndị ọbịa na-esi nweta ụlọ ọrụ azụmahịa gị bụ otu ihe nwere ike inyere gị aka ichebe saịtị gị. Gbaa mbọ hụ na ọ dịghịnzere na-egosipụta. Mee ka onye na-ahụ maka mmekọrịta gị site na ịdebe nchekwa weebụ gị.